Walaac Kale Iyo Xaalada Oo Ka Sii Daraysa Hadii Uu Dib U Baaqdo Horyaalka Premier League? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa la fasaxay illaa horraanta bisha soo socota ee April, taas oo looga jeedo in lagu yareeyo khatarta xanuunka sii faafaya ee Coronavirus oo qaaradda Yurub dalal badan ay la dhibaatoonayaan.
Waddanka China oo uu kasoo bilaabmay ayaa soo kabasho sameeyey, waxaana maalintii shalay la diiwaangeliyey 5 kiis oo cusub oo kali ah, halka Talyaaniga ay dhawr boqol maalintiiba noqonayaan dadka cusub ee uu ku dhacayo.
Go’aan ay wada jir u soo saareen xidhiidhka FA, EFL iyo Maamulka Premier waxay ku sheegeen in ciyaaraha la fasaxay bishan March oo usbuucii ugu horreeyey oo kaliya la ciyaaray, hase yeeshee waxa iyaguna sidaas oo kale sameeyey Talyaaniga oo ahaa dalkii ugu horreeyey ee go’aankan qaatay iyo Spain oo ku xigay, halka UEFA ay ugu dambayntii meesha ka saartay Champions League iyo Europa League.
Sida maamulka Premier League sheegay, waxa ay ciyaaruhu dib ugu bilaabmi doonaan April 4, laakiin waqtigaasi maaha mid go’an oo la hubo inay ciyaaruhu bilaabmi doonaan, waana tan midda walaaca ku haysa kooxaha.
Walaacan ayaa waxa uu ku sallaysan yahay hubanti la’aan ah in xilliga ay maamulku u qabteen in la ciyaari doono ay ka horreyso caqabad weyn oo ah in waqtigii oo soo dhowaaday uu xanuunkiina ku faafayo dunida.
Agaasimaha fulinta Aston Villa, Christian Purslow oo la weydiiyey xilliga uu dhamaan doono horyaalka xilli ciyaareedkan, ayaa si cad u sheegay in aanu wax fikrad ah ka haynin, sidoo kalena aanu hubin inuu dhamaan doono, waxaase uu hoosta ka xariiqay inay jirto rajo ah inuu dhamaan doono.
Jimcihii shalay, Guddoomiyaha FA-ga, Greg Clarke ayaa sheegay in shir xaasaasi ah oo ay yeesheen ay iskula soo qaadeen arrimo dhawr ah iyo tallaabooyinka ay qaadi doonaan haddii ay xaaladdani sii socoto oo horyaalka la dhamaystiri kari waayo.
Khamiista soo socota, waxa shir ku ballansan 20-ka kooxood ee horyaalka heerka koowaad ee Premier League, waxaanay soo bandhigi doonaan qorshe degdeg ah oo lagula tacaalayo Xanuunkan oo xattaa u gudbay ciyaartoyga iyo maamulka naadiyada, waxaanay talo siin doonaan Xidhiidhka FA iyo Premier League.
Si kastaba ha ahaatee, dhamaan kooxaha Ingiriisku waxay ka walaacsan yihiin haddii la dhamaystiri doono tartanka Premier League ee xili ciyaareedkan iyo haddii muddada la cayimay ay suurtogal tahay inay dib ugu bilaabmaan ciyaaruhu.
Lucien Favre Ayaa Markan Shaki Galiyey Mustaqbalka Mario Gotze?